lundi, 15 février 2021 19:21
Ilaifito : Mitondra ny 70%n’ny rotsakorana mandavan-taona amin’ny faritra trôpikaly
Ny Ilaifito no isan’ny mitondra ny 70%n’ny rotsakorana mandavan-taona amin’ny faritra trôpikaly, tafiditra anatin’izany i Madagasikara. Ho an’i Madagasikara manokana dia nisy ny tranga Ilaifito izay nanomboka nitoetra tao amin’ny lakandranon’i Mozambika ny Alahady 07 Febroary 2021 ; nitondra orana saika manerana ny nosy izany nanomboka ny Alatsinainy 08 Febroary 2021 lasa teo, ary nitohy hatramin’ny Alahady 14 Febroary 2021. Somary ho maimaina ny andro manomboka amin’ny alarobia any. Tsara ny manamarika fa anisan’ny miteraka fiforonana rivodoza ny Ilaifito rehefa tena matanjaka ; miseho izany, indrindra aty amin’ny faritry ny lakandranon’i Mozambika.
Zoma manjombona ny omaly 12 Febroary 2021 raha nahita ny lozam-pifamoivoizina mahatsiravina nitranga teto amin'ny Fokontany Soavinandriana Kaominina ambonivohitra Sambava. Taxi niampita tampoka rehefa nahita mpandeha kanjo nisy kamiao nandeha mafy ihany koa ka tsy azo nialana ny loza. Voafaoka ny Taxi ary nipitika tao ambany kamiao ilay mpamily, ka maty tsy tra-drano. Tovolahy mbola erotrerony satria manodidina ny 25 taona ary namela kamboty kely tokony ho 2 taona ilay mpamily.
vendredi, 12 février 2021 15:23
EPP Ambatoharanana ZAP Andasibe Sud Cisco Vavatenina
Nanao fanentanana sy fanairana ireo olona tandindomin-doza eny amin'ny faritra ambanin’ny vato be Mahamasina sy ny manodinana ny BNGRC, ny Ministeran'ny mponina, ny CUA, ny avy amin’ny Corps de Protection Civile (CPC) ary ireo avy ao amin’ny Sapeur Pompier, androany Alakamisy 11 Febroary 2021. Ahiana hirotsaka ny vato be noho ny oram-be mikija nandritra izay andro vitsivitsy izay, ary mbola hitohy hatramin’ny faran’ny herinandro raha ny vinavinan’ny mpamantatra ny toetr’andro. Nametrahana saina mena tamin'ireo toerana mety hampidi-doza. Mbola hitohy rahampitso ny fametrahana izany saina mena izany.
mercredi, 10 février 2021 23:11
Toliara : Tratra ireo Thaïlandais roalahy hanondrana safira 08kg
Voasambotra teny amin'ny seranam-piaramanidina Toliara ireo Thaïlandais roalahy, ny talata 09 febroary tamin'ny 12ora atoandro, saika hanondrana safira hiakatra an'Antananarivo tamin'ny zotra fiaramanidina Tsaradia. Rehefa nojerena ny bagage à main dia hita tao ny saphir karazany 2, maitso sy grenat izay milanja 08 kg 26g (08 sachets). Nosamborina avy hatrany ireo, ary nentina ao amin'ny Police de mine Toliara.Mitohy ny famotorana azy ireo amin'izao fotoana izao.
mercredi, 10 février 2021 19:25
KMF-CNOE : Mitaky ny amotsorana ny filoha lefitry ny fikambanana naneho hevitra
KMF-CNOE : Mitaky ny amotsorana ny filoha lefitry ny fikambanana naneho hevitra (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 09 février 2021 11:07
Volamena 73,5kg : Hisy fitsarana handeha ao Afrika Atsimo anio
Hofantatra anio 9 febroary ny tohin’ny fitoriana nataon’ny Parpia Gold, orinasa iray any Dubai, mitonona ho tompon’ny volamena 73,5kg tratra tao Johannesburg tamin’ny 31 desambra 2020. Nitory amin’ny nanagiazana ny volamena sy ny nitazonana ireo “mpiasa” telo lahy nitondra azy ity orinasa izy.
mardi, 09 février 2021 08:51
Sendika Paramedy : Vonona mandrakariva ary maniry ny fifampidinihina
Roso hatrany ao anatin'ny fitokonana ny Sendika Paramedy manoloana ny ambarany fa “tsy rariny” mahazo azy ireo. Na izany aza dia nanao fanambaràna tamin’ny tambazotra sosialy facebook Ralibera Jerisoa fa “vonona mandrakariva ary maniry ny fifampidinihina hatrany, saingy TSY ekena ny endrika famonoan'afo ara-politika milaza hoe ajanony aloha ny Grevy dia horaisina ianareo, toy ny nameriverena antsika tamin'ny 2009, 2010, 2012, fa aoka hanana hitsimpo ka rehefa misy ny fahavononana hidinika dia omeo anay ny toerana, ora ary daty fa ho avy ny birao nasionaly sy ny mpitarika”. Anton’ny fitakian’ny sendikan’ny Paramedy ny fampiharana ny didim-pitondrana 5530/2017-MINSAN tamin'ny 10 marsa 2017 miaraka amin’ny IES nanomboka ny taona 2017, “indemnité de réquisition” 228 andro tamin’ny Covid-19, ary ny handraisana ho mpiasan’ny fahasalamana ireo mpilatsaka an-tsitrapo 10 000 niasa aman-taonany nanohana ireo rafitra ara-pahasalamana.
lundi, 08 février 2021 07:19
samedi, 06 février 2021 22:34
Volamena 73.5kg : Nidoboka eny Tsiafahy ny Zandary RAJERY Jean Mexin
Taorian'ny fanadihadiana nataon'ny Fitsarana miady amin'ny kolikoly, na ny PAC, ny zandary 1ère classe RAJERY Jean Mexin dia notantanana am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy, noho ny fisandohana andraikitra, fitsikombakombana trafika volamena, fanaovana sy fampiasana hosoka, fanararaotam-pahefana. Izy ilay zandary nanao sonia taratasy fandraisam-bola 80 000ar ho saran'ny fiambenana sy fanaraha-maso amin'ny fahatongavan'ny fiaramanidina. (Jereo Sary Tohiny)
Page 3 sur 621